Ingulube ebhakiwe elula futhi enamanzi, izindlela zokupheka zesinyathelo ngesinyathelo | Ukupheka Kwekhishi
Namuhla sizolungisa ithenda yengulube ebhakwe. Ukulungiswa kwayo kuzoba lula kakhulu, kepha izivakashi zakho ngokuqinisekile zizokunikeza intambo ye-bleu.
Njengendlela entsha, sizosebenzisa isikhwama sokuwosa, esikuvumela ukuthi ukhohlwe ngokupheka, ngeke kudingeke ulawule ukuthi uketshezi luyoma yini, ngeke ube nentuthu noma iphunga ekhishini lakho, futhi okubaluleke kakhulu, ngeke ungcolise noma iyiphi ipani yokuwosa.
Isikhathi sokulungiselela: imizuzu engu-50
1 Iresiphi yokupheka inyama yengulube ebhakwe nge-sauce
2 Amathiphu wokwenza inyama yethumba yengulube ebhakayo ibe namanzi
3 Ithenda yengulube ebhakwe nemifino
3.1 Izithako zabantu abangu-4
4 I-baked yengulube ebilisiwe enesinaphi noju
4.1 Izithako 4 abantu
5 Inyama yengulube eboshwe ibhakwe
5.1 Izithako 4 abantu
Iresiphi yokupheka inyama yengulube ebhakwe nge-sauce
1 Kg ingulube loin
2 isipuni. Isoso se-BBQ noju
1 isipuni ummbila osheshayo
Usawoti, upelepele, upelepele
1 isikhwama sokubhaka
Ukuhlobisa / Ukuhambisana:
Ama-apula ama-4 egolide
Sishisa ihhavini ibe ngu-200 º. Sifaka inyama ngosawoti ocolekile.
Ngaphambi kokubeka ukudla ngaphakathi kwesikhwama sokuwosa, siphendulela umphetho ongaphandle cishe ngamasentimitha amahlanu, ngakho-ke sizokugcina kuvulekile futhi kuzoba lula ngathi ukwethula izithako.
Lapho isikhwama sesivulekile, sibeka inyama phansi bese sifaka isinisi esomile, isinaphi, isoso lesoso ngoju, u-anyanisi nogalikhi osikwe phakathi. Ekugcineni sifaka amaqabunga e-mint bese sivale ngophawu lwayo. Sigqugquzela okuqukethwe ukusabalalisa isinongo kahle ngaphakathi.
Sihlela isikhwama esitsheni sokubhaka, bese senza ukusika ekhoneni elingenhla ukuze umusi ubaleke.
Sifaka isitsha phakathi kuhhavini osushisayo, ungabi ngaphezu kuka-200º. Siyibeka kahle ukuze ingaxhumani nanoma iyiphi into eshisayo.
Isikhathi sokupheka sincike kokuthandwayo ngakunye, ngekhilo kufanele silawule ukupheka ngemizuzu engama-40. Sethula ummese futhi uma kuphuma ujusi obomvu usahlaza, uma ubunsundu uzobe usulungile futhi uma womile, usudlulile kithi.
Lapho sibheka ukuthi kuthanda thina, siyakususa kuhhavini.
Epanini sithela uketshezi lokupheka, sibeka inyama ebhodini bese siyisika ibe izingcezu ezincanyana.
Sisusa u-anyanisi nogalikhi kusuka kujusi wokupheka bese sikusa emlilweni ukuze ushise isoso, sifafaze isipuni se-cornstarch kuso bese siyishiya sibile size sikhule.
Sihlela izingcezu kupuleti lokuphaka bese sizicwilisa nge-sauce. Hlobisa ngamanye amahlamvu eminti.
Ngokuhambisana nakho, siyahluba bese sinquma ama-apula abe izingcezu bese siwadlula nge-griddle ezinhlangothini zombili.
Futhi ngengilazi yeCabernet Sauvignon, ukuthanda ukudla!
Amathiphu wokwenza inyama yethumba yengulube ebhakayo ibe namanzi
Vele, inyama emnandi impela iyamanzi. Ngaphandle kwalokho, kuzokwenza uhlobo lwebhola le-bubblegum emilonyeni yethu. Okuthile okungathandeki kakhulu futhi okuncane, uma unezivakashi. Ngakho-ke, ukuze ungaphumeleli ngesikhathi esinjengalesi, awukwazi ukungazinaki lezi zeluleko ukuze ithenda yengulube ebhakwe ibe namanzi amaningi.
Ngaphambi kokubeka ucezu lwenyama, kuhhavini kufanele kufudunyezwe. Okuthile okubalulekile ekuphekeni okuningi, kepha ikakhulukazi kulokhu.
Khumbula ukufaka iwayini elincane noma imifino enyameni ukuze uhambe nayo. Akuningi kakhulu, ukufaka nje ukuthinta okumnandi esiqeshini sethu. Lokhu kuzongeza ukunambitheka okuncane futhi kususe ukuthinta okomile.
Ijusi eliwa enyameni, kuhlanganiswe nezengezo ozikhethile. Kokubili iwayini nemifino esikhulume ngayo kungasetshenziswa futhi. Okokuqala, ungasebenzisa isipuni bese uwathela phezu kwenyama ngenkathi kusashisa. Uma unensalela eyanele, kufake esikebheni sososo ukusishiya etafuleni ukuze ngamunye anikezwe ukunambitha.
Impahla eluhlaza esiyisebenzisayo nayo ibalulekile ukukhuluma ngomphumela onamanzi.
Uma usuphumile kuhhavini, vumela inyama iphumule cishe imizuzu eyi-15 ngaphambi kokusika noma ukukhonza.
Abantu abaningi bakhetha ukuyivala inyama ngaphambi kokuyiyisa kuhhavini. Kumane nje kuyindaba yokuwufaka umbala onsundu epanini. Ngale ndlela, ujusi wenyama uzohlala lapho kudingeka khona, ngaphakathi.
Ithenda yengulube ebhakwe nemifino
El Ithenda yengulube ebhakwe nemifino Kungokunye kokuhluka okumnandi kakhulu esingakuthola. Ngaphezu kwanoma yini ngoba inyama izofakwa ezicini ezinhle zemifino futhi izongeza ukunambitheka okuningi. Njengakulezi zimo, izinhlobonhlobo zokupheka zivame kakhulu. Kepha sizokwenza kube lula kakhulu. Ngale ndlela, wonke umuntu angazuza kwiresiphi enjengale. Kubhale phansi!
Ingulube ishiya ikhilo elilodwa, cishe.
3 utamatisi ophakathi
4 wezipuni uwoyela we-olive
Usawoti, upelepele ne-oregano noma i-thyme.
Okokuqala, sizonakekela ukunambitheka kwenyama. Ukuze senze lokhu, sizofaka usawoti, kanye ne-oregano nopelepele, ngaphandle kokukhohlwa uwoyela. Manje, kuzofanele sisike imifino. Okuhle kakhulu ukuthi u-anyanisi uya emasongweni, notamatisi ube yizicucu, kanti upelepele ungcono uma ungamapheshana. Yize wonke umuntu angenza ukusika akuthandayo. Kumele futhi sizinongele le mifino ngosawoti omncane, i-oregano namaconsi ambalwa kawoyela.
Manje kufanele sikwenze nje beka imifino enyameni bese ugoqa konke ku-aluminium foil. Sikusa kuhhavini cishe imizuzu engama-20. Ngemuva kwalesi sikhathi, sizosusa iphepha futhi sizolivumela liqhubeke nokwenza, kungamboziwe, eminye imizuzu eyi-12 noma eyi-15. Ukulawula i-ovini njalo, ngoba akuyona yonke into efanayo futhi eminye idinga imizuzu engaphansi. Sizoyiphaka isikwe izingcezu futhi ungahamba nayo namazambane athosiwe noma athosiwe amnandi.
I-baked yengulube ebilisiwe enesinaphi noju
Uma ufuna ukujabulela ukunambitheka okuhlukile, kepha uhlala ushiya izivakashi zakho zimangele, akukho okufana nokulungisa iresiphi ye- I-baked yengulube ebilisiwe enesinaphi noju. Uzobona ukuthi lezi zithako zengeza kanjani i-juiciness eyengeziwe enyameni nakunambitheka kwayo.
Izithako 4 abantu
1 ikhilogremu yengulube
2 wezipuni lwesinaphi
I-90 ml yezinyosi
Usawoti, upelepele ne-oregano
Okokuqala, sizokunika inyama ukusikeka okulula. Lokhu kwenzelwa ukuthi lapho sifaka ezinye izithako zihlanganiswe nakho. Sishisa kuhhavini cishe kube ngu-200º. Sibeka iqatha lenyama kuthileyi bese kuthi, silungisa ama-marinade. Imayelana nokuxuba ugarlic oqoshiwe, uwoyela, isinaphi, uju esitsheni bese ufaka usawoti omncane ne-oregano. Lapho konke kuhlanganiswe kahle, nonga inyama bese ufaka ingxube phezulu.
Mboza kahle ngefoyile ye-aluminium bese uyifaka kuhhavini. Sizoyishiya imizuzu engama-45 noma engama-50, kepha njengoba sihlala sisho, qaphela ngoba i-ovini ngalinye lihlukile. Ungaya ukulihlola futhi uma selikulungele, uzosusa iphepha bese ushiya eminye imizuzu embalwa ukupheka kwalo ukuqeda.
Inyama yengulube eboshwe ibhakwe
El i-tenderloin yengulube eboshweKungaba enye yalezo zokupheka ezinzima kakhulu, kepha ngokuqinisekile ayinazo izinkinga. Ngaphezu kwalokho, kuhlale kuyindlela ephelele yesidlo sakusihlwa somndeni, lapho ufuna ukumangala khona ngesidlo esinothile futhi sokuqala kakhulu.
1 kg yengulube loin
Izingcezu ezi-12 ze-Serrano ham
Izingcezu eziyi-12 zebhekoni
Izingcezu eziyi-8 zeshizi.
Ingilazi yewayini elimhlophe
Ithisipuni le-thyme nelinye le-oregano.
Mhlawumbe ingxenye eyinkimbinkimbi kakhulu, ukuyibiza ngandlela thile ukunqunywa okhalweni. Kufanele sikunikeze ukusikeka okuphelele kathathu. Kumele ivuleke ngokuphelele, kube sengathi ungqimba olungunxande. Lapho sesikulungele, sishisa uhhavini. Manje sekufanele siyigcwalise. Ngokuqhubeka nenyama, sizofaka usawoti omncane nopelepele. Ngemuva kwalokho, imichilo yebhekoni, i-ham kanye noshizi kuzoba okulandelayo ukumboza lonke ithenda.
Kungumzuzu ofanele wokuwufaka futhi, unakekele ukuthi ayikho ingxenye yokugcwaliswa ephumayo. Siyayiqinisa kancane futhi ekugcineni siyibopha ngentambo ewugqinsi oluncane. Sifaka ucezu esitsheni sokubhaka bese sibuyela kusawoti nopelepele, engeza izinongo namafutha. Siyishiya isigamu sehora cishe ngama-degree angama-200. Ngemuva kwaleso sikhathi, kufanele uvule ihhavini uthele iwayini. Ngemuva kwalokho, sizoyishiya futhi cishe enye ingxenye yehora. Kepha yebo, qiniseka ngoba kuhhavini ngalinye liyahluka. Uma usuphumile kuhhavini, kufanele uyivumele ifudumale kancane bese ususa intambo.
Futhi uma uthanda, ungangabazi ukukuzama nge-orange:
Isikhathi sokupheka Imizuzu ye-40
Isikhathi esiphelele I-1 ihora
Inyama Ungadliwa, Ukupheka kukaKhisimusi, Ukupheka Okulula
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Ingulube ebhakwe
Izindlela zokupheka ezicebile kakhulu zihle kakhulu